गुटवालाहरुको रोइलो किन ? — esagarmatha.com
अध्यादेशका कारण अचानक खैलाबैला मच्चिएको छ, जुन अर्थहिन छ । जब केपिले ल्याउन खोजे त्यतिबेला महेश बस्नेतले खुलेरै भनेका हुन कुनै पार्टीमा बस्न उकुसमुकुस भयो, त्यसकारण हामिले अध्यादेश ल्यायौ केही गलत छैन ।
फेरि उतिबेलै गोकुलले भने अध्यादेश आयो भनेर किन रोइलो गर्नु गलत अर्थमा बुझ्नेहरुको हल्ला हो अध्यादेश आफैंमा गलत छैन । अब म भन्छु की आफ्नाले गर्दा त्यही कुरा सहि अर्कोले गर्दा गलत यस्तो प्रबृतिले नेपाली राजनीति बदनाम भैरहेको छ ।
उकुसमुकुस भएका माकुने गुटलाइ झ्याल खोलेर हावा छिराइदिएको जस्तो देखियो । अर्को कुरा एमालेले आफ्नो थैलिको मुख बाँधेर राखे किन डराउनुपर्यो फुटाउने अध्यादेश सङ्ग ?
अर्को कुरा ओली उनका समर्थकले पटकपटक भनेकै हुन माकुने गुटलाइ जानेभए जानुस तर हामी चाहे जति अधिकार दिन सक्दैनौ भनेर अनि त्यति भनिसकेपछी अध्यादेश सङ्ग किन डराउने ? अहिलेका पार्टीका युवाहरुको के कुरा गर्ने हनुमान मात्र हुन जो सङ्ग आफ्नो स्वबिकेक बुद्दी नै छैन, के सहि के गलत छुट्टाउन सक्दैनन ।
उनीहरु बुढा नेताको लगौटी समातेर आफ्नो ब्यक्तिगत भबिष्य तार्न बाहेक केही अरु उपलब्धि छैन । लहै लहैको भरमा दौडिरहेका छन् । उनीहरुले यसो एकछिन सोचेर के सहि गलत भन्ने छुट्टाउने हिम्मत राख्दैनन र राख्न चाहदैनन् ।
यसले गर्दा उनीहरु एकछिन लाई क्षणिक रुपमा गतिला देखिएपनी पछि गएर बाटोमा फालिएको खाली बोतल जस्ता हुने हुन जसलाई कसले कुल्चिन्छ कसैले लात्तिले हानेर यताउता गराउँछ । त्यसैले यस्ता होनहार युवाहरु अनर्थ रुपमा सडकमा छताछुल्ल हुनु किमार्थ राम्रो हुन्न ।
आफ्नो पार्टी जुटाए भैहाल्यो नि गोकुलले भने झै आफ्नो थैलिको मुख गतिलो नबान्ने अनि अर्काले खोलिदियो भने चिच्च्याउने ? यसरि अर्थहिन काममा सडकमा छरिनुभन्दा रोजगार बढाउने बिकास प्रबर्दन गर्ने कलकारखान उद्योग खोल्ने उपाय बिचार सहयोगको लागि अगाडि बढेको राम्रो ।
तिमीहरुको युवावस्था पुरानै ढर्राका नेताका लगौटी समातेर हिडनको लागि सिध्याउने हो र ?यसैको लागि राजनिती गरेका हौ ? अब त आफ्ना स्वबुद्दी पनि प्रयोग गर्ने गर । यो कुरा सबै पार्टीका युवाका लागि लागू होस् ।
-दिपक पाण्डेय, कुश्मा